हेरौंला, कस्तोसँग बिहे गर्दिरैछ! – विराट अनलाइन खवर
biratonlinenews 21/07/2021 1 min read
एउटा नाइँ, बीसवटा किन बोकेर आउँछ। यस्तो चिटिक्क परेको रूप छ त। अनि किन?
बिहेपछि पनि पढ्न, जागिर खान ‘दिने’ रे त। अनि किन?
यति तीन कोटा पुर्‍याएपछि जो पनि, जसका लागि पनि योग्य वर बन्ने परीक्षामा पास हुन्छ। अझ घरको काम पनि ‘सघाइदिने’ अनि जाँडरक्सी मुखै नलाइदिने हो भने त विशिष्ट श्रेणी! ओहो, अब त फुत्किनै भएन।
यति थाहा पाएपछि जति सर्वगुणी भए पनि मैले उहाँलाई आफ्नो लागि ‘ठीक’ देख्न सकिनँ। कसैगरी मन खोलेर बोल्न सकिनँ। बुझिहालेँ, म उहाँका लागि ‘ठीक’ छैन।
एकचोटि यस्तै प्रसंगमा अलिकति स्पष्टीकरण दिन खोजेको सम्झिन्छु। एकजना भिनाजुले मेरो कुरा भुइँ पुग्न नपाउँदै भूतको छाया फ्याँक्नुभयो, ‘सब गुण मिलेपछि जाबो एक-दुई कुरा मिलेन भन्दैमा साथी-पाथीको बहानाले कसैले नाइँ भन्छ? हेरौंला, कस्तोसँग बिहे गर्दिरैछौ!’
तपाईंलाई त के छ र भिनाजु, भोलि मैले तपाईंले ‘कुरूप’ देख्ने केटासँग बिहे गरेँ भने, फ्याट्ट भन्नु हुन्छ- पैसावाला भएपछि रूप किन चाहिन्थ्यो!
फेरि कोही देखिने ‘सुन्दर’ सँग बिहे गरेँ भने, त्यो बेला पनि गिज्याउन छाड्नु हुन्न- त्यही त, केटीलाई त्यति अनुहार मात्रैले पुग्ने रहेछ!
ऊ र मेरा नदेखिने कुरा मिलेको म भन्दै, देखाउँदै हिँड्दिनँ। ऊ र मेरो मन मिल्यो होला, तपाईं सोच्न चाहनु हुन्न। तपाईंले ‘कस्तोसँग बिहे गर्दिरैछौ’ भन्दै पर्खेको मेरो मान्छे जस्तो भए पनि तपाईंका आँखाले केही न केही खोट भेट्टाउने पक्का छ।
कति दिदीभिनाजु, दाजुभाउजू सँगै सुतिरहेका हुन्छन्। तर एकअर्कालाई यौनांगको घाउ देखाउन नसक्ने रहेछन्। हर दोस्रो दिन यौन सम्बन्ध राखिरहँदा पनि यौन समस्या सुनाउने आँट भने नआउने रहेछ। नन्द-भाउजूको कुरा हुँदा भाउजूले ‘तपाईंको दाइलाई भनेकै छैन नानी, तर यो सेतो पानीले साह्रै सताएको छ’ भनेका बेला यो कुरा याद गर्नु हुन्छ?
बेलाबेला त लाग्छ, यो ‘घर र कामलाई अलग्गै राख्नुपर्छ’ भन्ने धारणा पनि जोडी साथी बन्न नसकेको कमजोरी लुकाउने बहाना होला। नत्र आधा दिन बिताउने कार्यालयको कुरा अर्को आधा दिन बिताउने मान्छेसँग किन छुट्याउनु पर्ने?
‘अफिसको झगडाको कुरा गर्‍यो, श्रीमतीलाई वास्तै छैन।’
– के भयो त! खाना त मीठो पकाउँछिन् नि।
‘कामको उपलब्धिको कुरा गर्‍यो, भनेको कुरा श्रीमानको एउटा कानमा पस्छ अर्को कानबाट फुस्किन्छ।’
– के भयो त? जोडी त सुहाउँछ नि।
हाम्रो लागि पूजाआजा-बिहेमा मिलेको जोडी भनेर हाँसीखुसी हिँड्दासम्म, फेसबुकमा चिटिक्क जोडी परेर प्रेमिल फोटो राख्दासम्म बन्द कोठामा साथी भए पनि नभए पनि केही फरक पर्दैन। सम्झौताका कुरा यसरी गरिन्छ मानौं कसैले हामीलाई ‘ल यो पृथ्वीमा बाँच्, बिहे गर्, छोराछोरी जन्मा अनि मात्रै तेरो सजाय सकिन्छ’ भनेर जबरजस्ती पठाएको हो।
एक्लो जिन्दगी आफैंमा सुन हो, त्यसलाई सुगन्धित बनाउन बिहे गर्ने हो नि होइन? कि बरू पिटियोस्, थिचियोस्, बरू सुन ‘सुन’ नै नरहोस् मात्र पहेँलो रहे पुग्छ?
जिन्दगी बाँच्नका लागि खुब छोटो छ। अनि कटाउनका लागि बहुत लामो। आफ्नो जिन्दगी कटाउने कि बाँच्ने? कम्तीमा यति निर्णय जसको जिन्दगी हो उसैले गर्न पाउनुपर्छ। बिना कुनै स्पष्टीकरण। बिना कुनै भूतको डर।sorce
Tags: कस्तोसँग बिहे गर्दिरैछ! हेरौंला
Previous प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको जीवनकै यादगार सम्बोधन गर्नुहोस्!
Next कस्ले दिन सक्छ यि प्रश्नकाे जवाफ ?